Beesha Caalamka Oo si Caro Leh Uga Jawaabay Muddo Kordhinta Farmaajo loo Sameeyey.(Akhriso) – Heemaal News Network
Dhammaan saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa si weyn uga argagaxay horgeynta maanta ee Golaha Shacabka hindise sharciyeed soo jeedinaya in lagu beddelo heshiiskii 17-kii Sebtember loo maro hannaan doorasho oo ka dhalan doona muddo-kordhin dheeri ah oo ku timaadda waajibaadka Madaxweynaha iyo Baarlamaanka. Tallaabadani waxay wiiqi doontaa sharcinimada hay’adaha qaranka waxayna caddeyn doontaa kala qeybsanaan qoto dheer oo dalka ka jirta.
Waxaan si isdaba joog ah u sheegnay in aanan taageeri doonin geeddi-socodka siyaasadeed ee barbar socda, doorashooyinka qayb ahaanta ah, ama dadaallada cusub ee horseedaya in la kordhiyo waajibaadkii hore. Hindise sharciyeedkan ayaa caqabad weyn ku noqon doona wadahadalka wuxuuna sii wiiqayaa nabadda, amniga, iyo xasilloonida Soomaaliya iyo meelo ka baxsan. Hindise sharciyeedka noocan oo kale ah wuxuu sidoo kale sii daahinayaa qabashada doorashooyin lagu kalsoonaan karo oo ay sugayaan dadka Soomaaliyeed.
Dad ku Dhintay Dagaal Maanta ka Dhacay Xadka Goballada Tigray iyo Amxaarada.
Puntland Oo Sheegtay Inay Dagaalkii Daacish Uga Dishay 24 Xubnood.(Sawiro)